Ajụjụ - Ordrs Ajụjụ– Ordrs
Kedu ka o si dị iche na ịzụ ahịa n'ịntanetị site na nnukwu ụlọ ahịa (dịka Tesco direct)?
O yikarịrị ka ị ga-azụ ahịa site n'ọtụtụ ụdị ndị na-ere ahịa - ma eleghị anya ọ bụ nnukwu ụlọ ahịa dị ka Tesco, ụlọ ahịa ndị na-achụ nta ego dịka Aldi na ụlọrụ nọọrọ onwe ha dị ka ụlọ ahịa nri mba ụwa.
Ọhụụ anyị bụ itinye okporo ụzọ dị elu n'ịntanetị, na-enye gị ohere ịzụ ahịa site na nnukwu ndị na-ere ahịa na ụlọ ahịa (na ụlọ ahịa ndị ọzọ anaghị adị na ntanetị) n'otu usoro ntanetị dị mfe iji rụọ ọrụ. Anyị na-enye gị dịgasị iche iche nke n'okporo ámá dị elu na mma nke ịzụ ahịa n'ịntanetị.
Kedu ihe bụ akụkọ n'azụ Ordrs?
Ihe niile malitere site na ụkpụrụ!
Ndị na-emekọ ihe, Jimi na Davidson zutere na Mahadum York - ụkpụrụ anyị na-eme iji na-azụ ahịa n'ụzọ omume ma nwee mmetụta dị mma n'ụwa dugara na e kere Ordrs. Anyị kagburu azụmahịa anyị na ndị mmekọ gara aga (nke gaara ewepụtara anyị nnukwu uru) n'ihi agụụ anyị nwere ịzụ ahịa na usoro ụkpụrụ omume.
Mgbe ha hụrụ uto na nnweta nnyefe a na - achọ - ndị otu ntọala Ordrs - Jimi na Davidson gbara ọsọ ule na Mahadum York (ebe ọmụmụ anyị) nke gara nke ọma. Anyị lere ozi anyị na-arụ na Lewisham anya, ma mụtakwuo ihe karị! Anyị na-enyocha mgbe niile iji mee ọrụ ga-agbakwunye gị na ndụ gị!
Enwere m ike ịzụ ahịa site na ụlọ ahịa karịrị otu?
Ee, nke ahụ bụ isi ihe na - eme ka anyị pụọ iche! Nwere ike itinye ordr site na ụlọ ahịa niile na weebụsaịtị anyị!
You nwere ike itinyekwu ngwaahịa na weebụsaịtị gị?
Anyị na-emelite ngwaahịa na weebụsaịtị anyị ugboro ugboro - anyị nwere ike itinye ihe ọhụrụ n'ime nkeji. Hapụ anyị ozi na nkata a na-ebi ndụ, kpaliri anyị na davidson@ordrs.co.uk ma ọ bụ kpọọ anyị na 44 7534055985 na anyị ga-agbakwunye ndụmọdụ ngwaahịa gị ozugbo!
Enwere m ike ịrịọ maka ihe ndị ọzọ mgbe etinyechara m ordr?
N'ezie! Naanị tinye anyị ozi na nkata ndụ, kpaliri anyị na davidson@ordrs.co.uk ma ọ bụ kpọọ anyị na 44 7534055985 - anyị ga-edozi ya ozugbo enwere ike!
You na-akwado nnyefe otu ụbọchị?
Ee, anyị na-enye nnyefe otu ụbọchị, n’agbanyeghi, ohere nnyefe pere mpe nke ukwuu, yabụ tinye ordr gị ozugbo enwere ike!
Ego ole ka ọ na-eri?
Anyị na-ana £ 3.49 kwa ụlọ ahịa maka nnyefe n'ime ụbọchị 2 - akwụkwọ ọsọ ọsọ iji kwuo otu oghere nnyefe otu ụbọchị!
Enwere m ike ịhọrọ oghere nnyefe m?
Eeh, ozigbo ịtinye ordr - anyị ga - esetịpụ ma kwenye na oghere nnyefe kacha mma maka gị!
Ọ bụghị ihe niile dị na weebụsaịtị gị, enwere m ike ịnyefe ngwaahịa ndị a?
Anyị nwere ngalaba ndepụta na ndenye ọpụpụ, ịnwere ike iji aka tinye ụdị ihe ndị ọzọ ịchọrọ ma kwụọ ha n'ọnụ ụzọ site na kaadị ma ọ bụ ego.
N'aka nke ọzọ, anyị na-arụsi ọrụ ike na-agbakwunye ngwaahịa na weebụsaịtị anyị - dobe anyị ozi na nkata ndụ, kpaliri anyị na davidson@ordrs.co.uk ma ọ bụ kpọọ anyị na 44 7534055985 - anyị nwere ike ịgbakwunye ngwaahịa ịchọrọ n'ime nkeji ole na ole!
Gịnị bụ oghere nnyefe dị?
Oghere nzipu gwụchara ọsọ! Ma ha na-akasị dị na mgbede na ngwụsị izu - ha na-agbanwe agbanwe ma anyị nwere ike ịgbanwe ha ka ọ dabara na mkpa gị - naanị mee ka anyị mata mgbe ọ kacha mma maka gị!
Enwere m ike ikwugharị ordr nke m tinyere tupu?
Na akaụntụ akaụntụ, ị nwere ike ịlele ordrs gị gara aga ma weghachite otu ngwaahịa ahụ ngwa ngwa.
Ndi Ordrs na aru oru na izu uka?
Ee, ọtụtụ ebe ntinye anyị dị na ngwụsị izu!
Enwere m ike ịnweta mkpụrụ sitere na ndị na-egbu anụ?
Ee, ị nwere ike, anyị nwere onye mmekọ obodo na Lewisham akpọrọ Ameen Butchers & Groceries - nke ị nwere ike ịzụta mkpụrụ ọhụrụ.
Kedu mpaghara ị dị na ya?
Anyị na-arụ ọrụ na ndị a:
... Mana anyị na-achọ ịgbasa ya ka ị debanye aha na akwụkwọ akụkọ anyị ma lebe anya!
Enwere opekempe ordr?
Enweghị ego kachasị nta!
Nwere ike imefu penny ma ọ bụrụ na ịchọrọ - anyị achọghị!
You ga-enwe ike iweta ngwaahịa dịka ji, plantain na agbụrụ ndị ọzọ?
Ee, anyị nwere onye mmekọ obodo a na-akpọ Ameen Butchers & Groceries nke na-enye ezigbo ngwaahịa Asia, Africa na Caribbean. Anyị na-achọsi ike ịgbasa - dobe anyị ozi ma mee ka anyị mara ụdị ụlọ ahịa ịchọrọ na saịtị anyị!
Kedu ụlọ ahịa ndị m nwere ike ịzụta n'aka?
Ugbu a, ị nwere ike ịzụ ahịa si Tesco, Aldi, Iceland na Ameen Butchers & Groceries (ndị mmekọ obodo anyị). Ndị a bụ ụlọ ahịa ndị a kacha ewu ewu n'oge ikpe anyị. Anyị na-achọsi ike ịgbasa ka anyị mara ụlọ ahịa ịchọrọ ị gbakwunye na weebụsaịtị anyị.
Nanị tinye ngwaahịa ndị ị ga-achọ ụgbọ mgbe ahụ ọpụpụ.
Mgbe ahụ anyị ga - agbatị ma gosipụta oghere nnyefe nke dabara adaba maka nnweta gị wee wepụta akwụkwọ nri gị n'ọnụ ụzọ gị.
Enwere m ike ịkwụ ụgwọ ego n'aka?
N'ọtụtụ oge, Ordrs na-anata ụgwọ ịkwụ ụgwọ na weebụsaịtị anyị ka ọ na-enye anyị ohere ịnye gị ahụmịhe kachasị nchebe. Ọ na --emepụtakwa ebe ọrụ dị nchebe maka ndị otu Ordrs anyị. Onwere ego ole anyi nwere ike were ego ma obu kaadi n’onu uzo nke gunyere irio ihe ndi n’adighi na webusaiti anyi ma obu tinyekwuo ihe na ordr gi mgbe itinyere ya.
Na-achọ ndị ọkwọ ụgbọala nnyefe?
Anyị anaghị achọ ndị ọkwọ ụgbọ mmiri ugbu a kama anyị na-achọ ịgbasa ndị otu anyị n'ọdịnihu dị nso. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị, ị nwere ike idobe anyị email na davidson@ordrs.co.uk.
Ugbu a anyị enweghị ngwa mana anyị na-achọ ịmepụta otu n'ọdịnihu dị nso.
Only nwere naanị ụlọ ahịa na ngwa ahịa gị n'elu ikpo okwu?
Ee, ugbu a anyị na-elekwasị anya naanị n'ụlọ ahịa nri, agbanyeghị, anyị nwere ike ịtụle ịgbasa ụdị ụlọ ahịa na weebụsaịtị anyị.
ght gaa n'ụlọ gị n'otu ụbọchị. Otu nnyefe otu ụbọchị.